रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाको करिब साढे चार विघा जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको समाचार बाहिरिएसँगै लाखौंको लेनदेन भएको रहस्य समेत खुलेको छ।
सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भनिएको साविकको चिलिया गाविस ९ सोनारेत अहिले सियारी गाउँपालिका वडा नं. १ मा पर्छ।
नेपाली कांग्रेस सियारी गाउँ समितिले यसै साता गाउँपालिकाले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता सिफारिस गरेको, आफन्त र आफू निकटका कर्मचारी नियुक्ति गरेको जस्ता आरोप लगाउँदै गाउँपालिकामा घेराउ गर्दै ज्ञापनपत्र बुझायो।
कांग्रेसको ज्ञापनपत्र र घेराउपछि गाउँपालिकाले उक्त जग्गा २०७१ सालमै देवदह नगरपालिका वडा नं १ ढेकवारका २१ वर्षे विशाल तामाङको नाममा दर्ता गरिएको दाबी गरेको छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष अयोध्या थारुले नेपाली कांग्रेसले बिनाप्रमाण जनतामा भ्रम र अशान्ति फैलाउन गाउँपालिकामाथि आरोप लगाएको बताउँछन्।
उनले सियारी वडा नं. १ (साविक चिल्हिया-९) को कित्ता नम्बर ४५ को ४ विघा ९ कठ्ठा ६ धुर जग्गा २०७१ साल माघ १८ गते विशाल तामाङको नाममा दर्ता गरिएको देखिएको बताए।
अध्यक्ष थारुले भनेजस्तै तामाङसँग रहेको लालपूर्जामा पनि २०७१/१०/१८ को निर्णय अनुसार दर्ता हुन आएको मात्र उल्लेख छ।
उल्लेखित मितिको निर्णय अनुसार दर्ता हुन आएको उल्लेख गरिए पनि मन्त्री परिषद्को निर्णयबाट हो कि ? मालपोत अधिकृतको निर्णयबाट हो भन्ने खुलेको छैन।
उक्त जग्गा २०३५ सालदेखि स्थानीय चिल्हिया माविले प्रयोग गर्दै आएको थियो। सरकारी विद्यालयको जग्गामा एकाएक कसरी व्यक्तिको नामको लालपूर्जा बन्यो ? भन्ने प्रमाण मालपोत कार्यालयबाटै ‘गायब’ पारिएको छ।
मालपोतको स्रेस्तामा मिसिल नम्बर २८ बाट विशालको नाममा जग्गा दर्ता हुन आएको उल्लेख छ, तर मालपोत कार्यालयमा ‘मिसिल नम्बर २८ नै गायब’ छ।
मालपोत र नापी कार्यालयको फिल्ड बुकमा अहिले पनि उक्त जग्गा ऐलानी उल्लेख छ।
क्षेत्रफल ४ विघा ६ कठ्ठा ९ धुर छ। तर मालपोत कार्यालयले जारी गरेको लालपूर्जामा जग्गाको क्षेत्रफल ४ विघा ९ कठ्ठा ६ धुर उल्लेख छ।
सरकारी स्रेस्ताबाट व्यक्तिको नाममा एकैपटक दर्ता गरिएको उक्त जग्गा ओमसतिया गाउँपालिकाको लखनचोकबाट पश्चिममा पर्छ। तिनाउ नदीको उकास क्षेत्र भए पनि उक्त जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा १० लाखभन्दा बढी पर्ने गाउँपालिकाको दाबी छ।
अहिलेको मूल्यलाई हेर्दा पनि ९ करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने उक्त जग्गा विशाल तामाङको नाममा दर्ता हुँदा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने अनुमान गरीएको छ।
मालपोत कार्यालय भैरहवाका कर्मचारीका अनुसार ०७०/७१ तिर रुपन्देहीमा जग्गा कारोबार फस्टाएको थियो। जग्गा कारोबारी र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता रहेका विशालको त्यो बेला मालपोत कार्यालयमा दबदबा नै थियो।
तर गाउँपालिकाले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने र गाउँपालिका घेराउ गरेको नेपाली कांग्रेस उक्त जग्गासम्बन्धी ‘तीर’ आफ्नै कार्यकर्तातर्फ तेर्सिएपछि मौन छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष अयोध्या थारु पनि ‘कांग्रेस सरकारमा रहेको बेला विभिन्न जालझेल गरी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको र त्यसको दोष गाउँपालिकालाई थोपर्न खोजेको दाबी गर्छन्।
०७१ सालमा उक्त जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएका विशालले लालपुर्जा हराएको भन्दै २०७५ मंसिर २६ गते वडा कार्यालयको सिफारिसमा मालपोत कार्यालयबाटै प्रतिलिपि लिएका छन्।
भागवत उपाध्याय र विशालको सम्बन्ध, झोलाको २० लाखको रहस्य
भैरहवास्थित मालपोत कार्यालयको उत्तर भागमा लेखापढी व्यवसायीलाई व्यवस्थित गर्ने सेड बनाइएका छन्। त्यसैको पूर्वी उत्तर भागमा बस्छन् लेखापढी व्यवसायी संघका अध्यक्ष भागवत प्रसाद उपाध्याय।
२०७५ सालको माघ महिना अलि चिसो थियो। एक जना युवक सरासर आए र भागवतसँग सामान्य परिचय गरे। केही क्षणको भलाकुसारी पछि उनले आफ्ना साथमा रहेको झोला जिम्मा लगाउँदै भने ‘यो केही समय यही राखिदिनुस् म पछि आउँछु।’
भागवतले दिनभर ती युवाले जिम्मा लगाएको झोला कुरेर बसे, तर झोला छोडेका युवा फर्केनन्। साँझसम्म पनि झोला छोडेका युवा नफर्किएपछि भागवत झोला बोकेर घर फर्के। घर पुगेपछि भागवतले झोला खोलेर हेरे, २० लाख रुपैयाँ रहेछ। उनी दंग परे।
भागवतलाई २० लाख रुपैयाँसहितको झोला छोड्ने तिनै युवा थिए, जसका विरूद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा त्यसको केही दिन अगाडिमात्रै भागवतले उजुरी दिएका थिए।
आफैंले उजुरी दिएका युवालाई अपरिचित बताउने र यसरी रकम दिएको कथा बनाउने भागवतकै कुरा विश्वास गर्न सकिने आधार भने कमै छ। भागवतको भनाई पत्याउने हो भने पनि उनले अनायास प्राप्त गरेको २० लाख रुपैयाँ प्रहरीमा बुझाएनन्, आफैंले खर्च गरे।
आफैंले उजुरी दिएको व्यक्तिलाई अपरिचित बताउने र उनैले छोडेको २० लाख रुपैया सहितको झोलाबारे आठ महिनासम्म कसैलाई जानकारी नगराएको अवस्थामा अहिले सोनारेत जग्गाको विषय बाहिरिएपछि यो कथाले नयाँ मोड लिएको छ।
सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको भन्दै गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसले ज्ञापनपत्र बुझाए पनि विशाल तामाङ उक्त जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्न छोड्दैनन्।
सोनारेत गाउँमा जग्गा संरक्षणका लागि सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन समिति छ। उक्त समितिको अगुवाइ तिनै भागवत उपाध्यायले गर्छन्।
मालपोतमा लेखापढीको काम गर्ने भागवतकै मिलोमतोमा उक्त जग्गा विशालको नाममा गएको स्थानीयको आरोप छ।
भागवत र विशालबीचको २० लाख रुपैयाँ लेनदेनको रहस्यले पनि स्थानीयको आरोप, आरोप मात्र होइन भन्ने पुष्टि गर्छ।
विशालले भने उक्त रकम भागवतलाई सापटी दिएको दाबी गर्छन्। उनको भनाइ मान्ने हो भने पनि आफ्नाविरूद्ध उजुरी दिएका विपक्षीलाई मालपोत पुगेरै अपरिचितले जस्तै पैसा भरिएको झोला किन दिए ?
विशालसँग पनि यसको चित्त बुझ्दो जवाफ छैन।
‘मैले सापटी दिएको हुँ त्यो घरायसी कुरा हो,’ विशालले भने।
तर भागवतले भने त्यो पैसा सापटी नभएको बताएका छन्।
सोनारेत जग्गा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका भागवत भन्छन्, ‘मैले विशाललाई चिनेकै थिएन, कसरी सापटी लिनु ?’ उनले भनेकै पत्याउने हो भने पनि नचिनेको व्यक्तिले त्यसरी छोडेको पैसा आठ महिनासम्म पनि किन प्रशासनमा बुझाएनन् ? अनायास २० लाख रुपैयाँ आएपछि आफूले जग्गा रोक्का गर्न दिएको निवेदनबारे किन चासो दिएनन् ? उनी यो प्रश्नमा मौन छन्।
भागवतले सार्वजनिक जग्गा विशालले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको र जग्गाको स्रेस्ता कागजातमा प्रयोग गरिएको सही छाप समेत किर्ते जस्तै देखिएको भन्दै निजलाई पक्राउ गरी छानबिन गर्न र दर्ता खारेज गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा २०७५ माघ १ गते निवेदन दिएका थिए।
त्यसको केही दिनपछि मात्रै विशालले २० लाखसहितको झोला आफूसँग ल्याई छोडेको भागवतले स्वीकार गरिसकेका छन्। सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन समूहको अध्यक्ष भए पनि आफैंले दिएको निवेदनबारे खोजीनीति नगर्नुले पनि भागवतले विशालसँग पैसा असुल गर्नकै लागि उक्त निवेदन दिएका थिए भन्ने बुझ्न सकिन्छ।
भागवतलाई २० लाख रुपैयाँ सापटी दिएको बताउने विशालले आफूले भागवतको माग पूरा गर्न नसकेपछि जग्गा रोक्का गर्न भन्दै मालपोतमा उजुरी दिएको दाबी गर्छन्।
विशाल भन्छन्, ‘मैले उनीहरूको माग पूरा गर्न सकिनँ त्यसैले यो किचलो सुरू भएको हो। कहिले विद्यालयको जग्गा हो भन्ने, कहिले सार्वजनिक जग्गा हो भन्ने, कुरा फेरिरहने, मैले कसरी मान्ने, एउटै जग्गा कहिले कस्को कहिले कस्को भनेर हिस्सा मागिरहने ती माग पूरा गर्न सकिनँ।’
सोनारेत जग्गाको विषय बाहिरिएसँगै आठ महिना अघि विशालले छोडेको झोलाको २० लाखमध्ये ४ लाख रुपैयाँ अघिल्लो साता फिर्ता दिएको भागवतको भनाइ छ। बाँकी १६ लाख रुपैयाँ पनि शुक्रबार फिर्ता दिएको उनले दाबी गरे।
भागवत र विशाल बीचका बाझिएका यी भनाइले पनि सोनारेतको करिब साढे चार विघा जग्गामा चलखेल भएको बुझ्न सकिन्छ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, भदौ २९, २०७६, ०४:०२:००